Fomban-drazana hatsaraina kokoa
Isan’ireo « position » fanaon’ny mpivady matetika ny « missionnaire », nefa mety hankaleo izy io. Azo ovaina kely, hiavaka sy hanome fahafinaretana kokoa. Ohatra : asio ondana ao ambanin’ny lamosin’ilay vehivavy. Ho hitanao fa samy hafa ny fahatsapana re. Azo atao ihany koa ny mampiakatra ny tongotra 2, na ny ilany, an’ilay vehivavy, eo ambonin’ny soroka. Ho fanampin’izany, arindrao ny fihetsiketsehana atao : mbetika mafimafy, mbetika mora sy milamina.
Ny vehivavy no tompon’ny lakile
Ny vehivavy mihitsy eto no mandrindra ny fihetsika rehetra. Tsara raha tena miainga faran’izay alavitra indrindra ny vehivavy rehefa ilay mihetsika miakatra iny, izany hoe : ny lohan’ny filahiana sisa no ao anatiny, izay vao miverina midina indray. Miadana no anatanterahana izany. Tsara koa anefa raha manampy ny vehivavy hitazona ny “rythme” tiany ilay lehilahy.
Manakatra ny point “G”
Mora ahatakarana kokoa ilay atao hoe : “point G”, izay faritra kely tena mitondra fahafinaretana be ho an’ny vehivavy, ity paozy ity. Mandady ny vehivavy, avy ao aoriany ilay lehilahy no manofoka ny taovam-pananahany ao anaty fivaviana. Afaka mihetsika tsara ihany koa ilay vehivavy, manampy ny fihetsiky ny lehilahy.